Semalt विशेषज्ञ तपाइँको Google एनालिटिक्समा खराब यातायात कसरी लड्न सकिन्छ भनेर विस्तृत वर्णन गर्दछ
उदाहरणहरू छन् जहाँ नराम्रा ट्राफिक गुगल एनालिटिक्स सम्पत्तीमा पठाउन सकिन्छ। दुष्ट यातायातले ट्राफिकलाई जनाउँछ जुन कसैको रिपोर्टिंग तथ्या .्कहरूमा आवश्यक छैन। यो केवल किनभने दुष्ट यातायात वास्तविक यातायात होईन र त्यसैले गलत डाटा दिन्छ जसले तथ्या .्कलाई सws्केत गर्दछ। यस खतरालाई अन्त्य गर्ने कुञ्जी होस्टनाम समावेशीकरणको प्रयोग हो।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक लिसा मिशेल, कष्टप्रद दुष्ट यातायात बाट बच्न र सुरक्षित रहन कसरी परिभाषित गर्दछ।
त्यहाँ तीन मुख्य कारकहरू छन् कि दुष्ट यातायात को लागी ल्याउन:
डाटा उही गुगल एनालिटिक्स खातामा टेस्ट सर्भर ट्राफिक द्वारा पठाउन सकिन्छ।
उही प्रयोगकर्ताको स्वामित्वमा रहेको अर्को वेबसाईटमा उही ट्र्याकि code कोड दुर्घटनाका साथ प्रयोग हुन सक्छ।
सम्पत्ती आईडी अपहरण गर्न सकिन्छ र असम्बन्धित वेबसाइटहरूबाट उत्पन्न गलत डाटा पठाउन प्रयोग हुन सक्छ।
खराब यातायात एक बहिष्करण फिल्टर वा समावेश फिल्टरको प्रयोग गरेर डाटा रिपोर्टिंगबाट छुट पाउन सकिन्छ। यद्यपि यो समावेश फिल्टर सेट अप गर्न सिफारिस गरिन्छ र यो यातायात यातायात रोक्न प्रयोग गर्नुहोस्। यो उपयोगी छ किनकि यसले रिपोर्टलाई मात्र डाटा समावेश गर्न अनुमति दिन्छ जुन सही होस्टनामबाट निकालिन्छ। एक होस्टनाम डोमेन लाई जनाउँछ जसमा रूचि को वेबसाइट चलिरहेको छ। होस्टनामको सेटअप हुनु भन्दा पहिले निम्न आवश्यकताहरू छन्:
वेबसाइट डोमेन सम्बन्धी विकासकर्ताहरूबाट एक पुष्टिकरण
मुख्य रिपोर्टि view दृश्यमा स्थान्तरण अघि फिल्टर प्रभावको अनुगमनका लागि जिम्मेवार एक परीक्षण दृश्य हुनुपर्दछ।
त्यहाँ नियमित अभिव्यक्ति कसरी लेख्ने भन्ने बारे ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ।
एक गुगल एनालिटिक्स खाता रिपोर्ट होस्टनाम रिपोर्ट जाँचको माध्यम बाट अनावश्यक स्रोतहरू छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। होस्टनाम रिपोर्टमा श्रोता सेक्सनमा Google एनालिटिक्स खाता जाँच गरेर आउन सकिन्छ। नेटवर्क द्वारा अनुसरण गरिएको प्रविधि विकल्प चयन गर्नुहोस्। यो होस्टनामको प्राथमिक आयाम चयन गरेर पछ्याउँदछ।
विकास सर्वरबाट ट्राफिक प्राप्त गर्न सम्भव छ यदि होस्टनाम लागू गरिएको छैन भने। Http://translate.googleusercontent.com/ र http://webcache.googleusercontent.com/ बाट यातायात प्राप्त हुन सक्छ र प्राप्त हुन सक्छ मुख्य रूपमा किनभने:
१. तिनीहरूले देखाउँछन् जब गुगल अनुवाद सेवा वेबसाइटमा प्रयोग गरीएको छ
२. उनीहरूले देखाउँछन् जब खोजी परिणाममा "क्यास" विकल्प चयन गरिएको छ।
नियमित अभिव्यक्ति ढाँचा कसरी सिर्जना गर्ने
अभिव्यक्ति सिर्जनाकर्ता अभिव्यक्ति को निर्माण मा प्रयोग गर्नु पर्छ।
सिन्ट्याक्स चीटशिट प्रयोग गर्नुपर्दछ।
मेटाचारेटरहरूलाई पूर्ण स्टपको अगाडि पछाडि (\_) वा अगाडि स्ल्याश (/) राखेर बेवास्ता गर्नुपर्दछ।
एक नियमित अभिव्यक्ति को एक उदाहरण freshegg \_। (co \_ .uk | com) | googleusercontent हो। फिल्टर राम्ररी जाँच गर्नुपर्नेछ किनकि एक पटक डाटा रिपोर्टि view दृश्यबाट हटाइयो भने, यो कहिले पुन: प्राप्त हुन सक्दैन।
कसरी परीक्षण दृश्यमा फिल्टर सेट अप गर्ने
यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि फिल्टर यस नामाकरण सम्मेलन प्रक्रिया पछ्याएर अनावश्यक सम्पत्तिमा जान सकीदैन।
फिल्टर सेटिंग्स मा जानुहोस्
फिल्टर प्रकारमा, "अनुकूलन समावेश" विकल्प चयन गर्नुहोस्
"फिल्टर फिल्ड" विकल्पमा होस्टनाम इनपुट
"फिल्टर बान्की" इनपुटमा नियमित अभिव्यक्ति होस्टनाम
मुख्य रिपोर्टिंग दृश्यमा फिल्टर लागू गर्नु अघि निम्न चरणहरू गर्नुपर्दछ
१. देखा पर्ने मुद्दाहरूको पहिचान गर्न वास्तविक समय रिपोर्टहरू जाँच गरिनु पर्छ
२--5 दिन अवधि प्रतिक्षा गर्नुहोस् जुन ट्राफिकको मात्रामा निर्भर गर्दछ
Reporting. परीक्षण दृश्यबाट प्राप्त डाटा रिपोर्टि view दृश्यको साथ तुलना गर्नुहोस्
फिल्टरहरू शुक्रबार रिपोर्टि view दृश्यमा लागु हुँदैन किनकि उनीहरू सोमबार सम्म जाँच हुनेछैनन्।